10.09.21 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– तिमीले रूहानी बाबाबाट नयाँ-नयाँ रूहानी कुरा सुनिरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ– जसरी हामी आत्माहरू आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर आएका छौं , त्यसैगरी बाबा पनि आउनु भएको छ।”
साना-साना बच्चाहरूले बाबाले सम्झाएको कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिए भने कुनचाहिँ टाइटल लिन सक्छन्?
स्प्रिचुअल लिडरको। साना-साना बच्चाहरूले यदि कुनै हिम्मतको काम गरेर देखाउँछन्, बाबाद्वारा जे सुन्छन् त्यसमा ध्यान दिन्छन् र अरूलाई सम्झाउँछन् भने उनीहरूलाई सबैले धेरै प्यार गर्छन्। बाबाको नाम पनि प्रसिद्ध हुन्छ।
छोड भी दे आकाश सिंहासन....
बच्चाहरूले बोलाए, बाबाले त्यसको रेस्पोन्ड गर्नुभयो। प्राक्टिकलमा बच्चाहरूले के भन्छन्? बाबा हजुर फेरि रावण राज्यमा आउनुहोस्। शब्द पनि छन् नि– फेरि मायाको छायाँ परेको छ। माया भनिन्छ रावणलाई। त्यसैले पुकार्छन्– रावण राज्य आएको छ त्यसैले हजुर फेरि आउनुहोस्। रावणको राज्यमा यहाँ धेरै दु:ख छ। हामी धेरै दु:खी, पाप आत्मा बनेका छौं। अहिले बाबा प्राक्टिकलमा हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छौ– फेरि उही महाभारत लडाईं पनि सामुन्ने खडा छ। बाबाले ज्ञान र राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। बोलाउँछन् पनि– हे निराकार परमपिता परमात्मा, निराकारबाट आएर साकार रूप लिनुहोस्, रूप परिवर्तन गर्नुहोस्। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– तिमी पनि त्यहाँका निवासी हौ– ब्रह्म महत्तत्त्व वा निराकारी दुनियाँ। तिमीले पनि रूप परिवर्तन गरेका छौ। यो कसैले जान्दैन। जुन आत्मा निराकार छ, उसले नै आएर साकार शरीर धारण गर्छ। त्यो हो निराकारी दुनियाँ। यो हो साकारी दुनियाँ अनि त्यो हो आकारी दुनियाँ। त्यो भिन्नै हो। तिम्रो बुद्धिमा छ– हामी शान्तिधाम वा निर्वाणधामबाट आउँछौं। बाबालाई जब पहिला सुरुमा नयाँ रचना रच्नु पर्ने हुन्छ, त्यतिबेला सूक्ष्मवतनलाई नै रच्नुहुन्छ। सूक्ष्मवतनमा अहिले तिमी जान सक्छौ, पछि कहिल्यै जाँदैनौ। पहिला सुरुमा तिमी सूक्ष्मवतन भएर आउँदैनौ। सीधा आउँछौ। अहिले तिमी सूक्ष्मवतनमा आउन-जान सक्छौ। पैदल आदि जानु पर्ने कुरा त होइन। यो साक्षात्कार हुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई। मूलवतनको पनि साक्षात्कार हुन सक्छ, तर जान सक्दैनौ। वैकुण्ठको पनि साक्षात्कार हुन सक्छ, जान सक्दैनौ, जबसम्म सम्पूर्ण पवित्र बन्दैनौ। तिमीले यस्तो भन्न सक्दैनौ– हामी सूक्ष्मवतनमा जान सक्छौं। तिमीले साक्षात्कार गर्न सक्छौ। शिवबाबा, दादा र तिमी बच्चाहरू छौ। तिमी बच्चाहरूले कसरी नयाँ-नयाँ रूहानी कुरा सुन्छौ। यी कुरा दुनियाँमा अरू कसैले जान्दैन। भन्न त भन्छन् निराकारी दुनियाँ तर यो थाहा छैन– त्यो कस्तो हुन्छ? पहिला आत्मालाई नै जानेका छैनन् भने निराकारी दुनियाँलाई फेरि कसरी जान्दछन्! बाबा पहिला सुरुमा आएर आत्माको अनुभूति गराउनु हुन्छ। तिमी आत्मा हौ फेरि रूप परिवर्तन गरेका छौ अर्थात् निराकारबाट साकारमा आएका छौ।
अहिले तिमीले बुझेका छौ– हाम्रो आत्माले ८४ जन्म कसरी भोग्छ? त्यो सारा पार्ट आत्मामा रिकर्ड छ। पहिला यी कुरा सुनाइन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ– अहिले तिमीलाई गहन रमणिक कुरा सुनाउँछु। जुन तिमीले पहिला जान्दैनथ्यौ, त्यो अहिले जानेका छौ। नयाँ-नयाँ प्वाइन्टहरू बुद्धिमा आउँदै जान्छन् त्यसैले अरूलाई पनि तुरुन्त सम्झाउन सक्छौ। दिन-प्रतिदिन यो ब्राह्मणहरूको वृक्ष बढ्दै जान्छ। यो नै फेरि दैवी वृक्ष बन्नु छ, ब्राह्मणहरूको नै वृद्धि हुन्छ। देख्नमा कति थोरै देखिन्छन्। जसरी विश्वको नक्सामा इन्डिया कति सानो देखिन्छ। वास्तवमा इन्डिया कति ठूलो छ। त्यसैगरी ज्ञानको लागि भनिन्छ– मनमनाभव अर्थात् अल्फलाई याद गर। बीज कति सानो हुन्छ। वृक्ष कति ठूलो हुन्छ। त्यसैले यो ब्राह्मण कुल पनि सानो छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। तिम्रो बुद्धिमा छ– हामी यस समयमा ब्राह्मण छौं फेरि देवता बन्छौं। ८४ जन्मको सींढी त धेरै राम्रो छ। बच्चाहरूले सम्झाउन सक्छन्– जसले ८४ जन्म लिन्छन्, उनीहरूले नै आएर बुझ्छन्। फेरि कसैले ८४ कसैले ८० जन्म पनि लिन्छन्। यो त सम्झन्छन् हामी यस दैवी कुलका हौं। हामी सूर्यवंशी घरानाको बन्छौं। यदि फेल भयौ भने फेरि ढीलो गरी आउँछौ। सबै एकैचोटि त आउँदैनन् (स्वर्गमा)। ज्ञान धेरैले लिइरहेका छन्, तापनि एकैचोटि त आउँदैनन् नि। जान्छन् एकैचोटि आउँछन् थोरै-थोरै गरेर। यो त बुझ्ने कुरा हो नि। सबैले कसरी एकैचोटि जन्म लिन्छन्। बाबालाई बोलाउँछन् नै– बाबा फेरि आएर गीताको ज्ञान सुनाउनुहोस्। त्यसैले सिद्ध हुन्छ– जब महाभारत लडार्इं हुन्छ, त्यस समयमा नै आएर गीताको ज्ञान सुनाउनु हुन्छ। त्यसलाई नै राजयोग भनिन्छ। अहिले तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ। कल्प-कल्प ५ हजार वर्षपछि बाबाले हामीलाई आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। सत्य नारायणको कथा सुन्छन् नि। उनी कहाँबाट आउँछन् फेरि कहाँ जान्छन्? जानेका छैनन्। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! यो जुन रावणको छायाँ परेको छ, अब ड्रामा अनुसार खतम हुनु छ। सत्ययुगमा हुन्छ रामराज्य र यतिबेला छ रावण राज्य। अहिले तिमीले बुझेका छौ– हामीमा जुन ज्ञान आएको छ, त्यो यस दुनियाँमा कसैमा छैन। हाम्रो यो नयाँ पढाइ हो, नयाँ दुनियाँको लागि। गीतामा कृष्णको नाम लेखेका छन्, त्यो त पुरानो कुरा भयो नि। तिमीले अहिले नयाँ कुरा सुनिरहेका छौ। भन्छन्– यो त कहिल्यै सुनेनौं, शिव भगवानुवाच। हामीले त कृष्ण भगवानुवाच सुन्दै आएका थियौं। नयाँ दुनियाँको लागि तिमीले हरेक कुरा नयाँ सुन्छौ। यो सबैले जानेका छन्– भारतवर्ष प्राचीन हो। तर कहिले थियो? यी लक्ष्मी-नारायणको राज्य कसरी चल्यो? यिनले कसरी राज्य पाए? फेरि कहाँ गए, यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। के भएर यिनको राज्य खतम भयो? कसले जित्यो? केही पनि जानेका छैनन्। उनीहरूले त सत्ययुगलाई लाखौं वर्ष भनिदिएका छन्। यो हुन सक्दैन– लक्ष्मी-नारायणले लाखौं वर्ष राज्य गरे। त्यसो हो भने त सूर्यवंशी राजाहरू धेरै हुन्छन्। कसैको पनि नाम त छैन। १२५० वर्षको बारेमा कसैलाई थाहा छैन फेरि लक्ष्मी-नारायणको राज्य कहाँसम्म चल्यो, यो पनि कसैलाई थाहा छैन भने लाखौं वर्षको कुरा कसरी थाहा हुन सक्छ? कसैको बुद्धिले काम गर्दैन। अहिले तिमी साना-सानाले पनि तुरुन्तै सम्झाउन सक्छौ। यो छ धेरै सहज। यहाँको नै कथा हो, सारा स्टोरी हो। सत्ययुग त्रेतामा पनि राजाहरू थिए। अलग-अलग चित्र पनि छन्। आज भन्दा ५ हजार वर्ष पहिला, तर यहाँ त हजारौं वर्ष भनिदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ– यो हो नै ५ हजार वर्षको कथा। आज भन्दा ५ हजार वर्ष पहिला लक्ष्मी-नारायणको राज्य थियो, डिनायस्टी थियो फेरि पुनर्जन्म लिँदै गए। साना-साना बच्चीहरूले थोरै मात्र सम्झाए भने पनि बुझ्छन्– यिनले धेरै राम्रो ज्ञान पढेकी रहिछन्। यो आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक पिता बाहेक अरू कसैसँग छैन। तिमीले भन्छौ– हामीलाई पनि आध्यात्मिक पिताले आएर बताउनु भएको हो। आत्माले शरीरद्वारा सुन्छ। आत्माले नै भन्छ म फलानो बन्छु। स्वयंको अनुभूति मनुष्यहरूले गर्दैनन्। हामीलाई बाबाले अनुभूति गराउनु भएको छ। हामी आत्माहरूले ८४ जन्म पूरा लिन्छौं। यस्ता-यस्ता कुरा बसेर सम्झायो भने भन्छन् यिनको त धेरै राम्रो ज्ञान रहेछ। ईश्वर ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ नि। गाउँछन् पनि– गड इज नलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, तर गाइडले कहाँ लैजानुहुन्छ यो कसैले जानेको छैन। यो कुरा बच्चाहरूले सम्झाउन सक्छन्। रूहानी बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुखका सागर भनिन्छ। मनुष्य धेरै दु:खी भएपछि मात्रै मुक्ति दिनुहुन्छ। एक रावणको राज्य हुन्छ। हेविनली गड फादर भनिन्छ। नर्कलाई रावण राज्य भनिन्छ। यो ज्ञान कसैलाई सुनायौ भने तुरुन्त भन्छन्– गएर यो सबैलाई सुनाउनुहोस्। तर धारणा धेरै राम्रो चाहिन्छ। प्रदर्शनीका चित्रहरूको पत्रिका पनि छ, अरूले पनि सिक्यौ भने यसमा धेरै राम्रो सेवा गर्न सक्छौ।
यी बच्ची (जयन्ती दिदी)ले पनि त्यहाँ लन्डनमा आफ्नो टिचरलाई सम्झाउन सक्छिन्। त्यहाँ लन्डनमा यो सेवा गर्न सकिन्छ। दुनियाँमा ठगी धेरै छ नि। रावणले एकदमै सबैलाई ठग बनाइदिएको छ। बच्चाहरूले सारा विश्वको इतिहास-भूगोल सम्झाउन सक्छन्। लक्ष्मी-नारायणको राज्य कति समय चल्यो फेरि फलानो सम्वतबाट इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आउँछन्। वृद्धि हुँदा-हुँदा भेराइटी धर्मको वृक्ष कति ठूलो हुन्छ। आधाकल्प पछि अरू धर्म आउँछन्। यस्ता-यस्ता कुरा बसेर सुनायौ भने सुन्नेले भन्छन्– यिनीहरू त स्प्रिचुअल लीडर रहेछन्, यिनीहरूमा आध्यात्मिक ज्ञान छ। यिनीहरूले फेरि भन्छन्– यो ज्ञान त इन्डियामा मिलिरहेको छ। स्प्रीचुअल गड फादरले दिइरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ बीजरूप। यो उल्टो वृक्ष हो। बीज हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर। बीजलाई वृक्षको ज्ञान हुन्छ नि। यो भेराइटी धर्मको वृक्ष हो। दैवी धर्म यसलाई भनिन्छ। पहिला लक्ष्मी-नारायणको राज्य, फेरि हुन्छ राम-सीताको राज्य। आधाकल्प यो चल्छ फेरि पछि गएर आउँछन् इस्लामी.... वृक्षको वृद्धि हुँदै जान्छ। यसरी गएर यी बच्चीले भाषण गरेर सम्झाऊन्– यो वृक्ष कसरी निस्किन्छ? यो सृष्टि-चक्र कसरी घुम्छ? हामीले सम्झाउन सक्छौं। बेलायतमा त अरू कोही छैन। यी बच्चीहरूले गएर अहिले कलियुगको अन्त्य हो र सत्ययुग आउँदै छ भनेर सम्झाए भने यो सुनेर उनीहरू धेरै खुशी हुन्छन्। बाबाले युक्ति बताइरहनु हुन्छ, यसमा ध्यान दिनुपर्छ। साना बच्चाहरूलाई धेरै मान मिल्छ। सानो कसैले हिम्मतको काम गर्छ भने उसलाई धेरै प्यार गर्छन्। बाबाले चाहनुहुन्छ– यसरी-यसरी बच्चाहरूले यसमा ध्यान दिऊन् र स्प्रीचुअल लीडर बनून्। स्प्रीचुअल गड फादरले नै बसेर ज्ञान दिनुहुन्छ। कृष्णलाई गड फादर भन्नु भूल हो। गड त हुनुहुन्छ निराकार। हामी सबै आत्माहरू भाइ-भाइ हौं, उहाँ पिता हुनुहुन्छ। कलियुगमा सबै दु:खी भएपछि मात्र बाबा आउनु हुन्छ। फेरि कलियुग भएपछि बाबालाई सत्ययुगको स्थापना गर्न आउनु पर्ने हुन्छ। भारत प्राचीन सुखधाम थियो, हेभन थियो। धेरै कम मनुष्य थिए। बाँकी यतिका सबै आत्माहरू कहाँ थिए? शान्तिधाममा थिए नि। यसरी सम्झाउनु पर्छ। यसमा डराउनु पर्ने कुरा छैन। यो त कथा हो। कथा खुशीले बताइन्छ। विश्वको इतिहास-भूगोल कसरी दोहोरिन्छ, यसलाई कथा पनि भन्न सकिन्छ। ज्ञान पनि भन्न सकिन्छ। तिमीलाई त यो पक्का याद हुनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मेरो आत्मामा सारा वृक्षको ज्ञान छ जसलाई मैले दोहोर्याउँछु। ज्ञानका सागर बाबाले बच्चाहरूलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। यिनले गएर ज्ञान दिइन् भने भन्छन्– तपाईले अरूलाई पनि बोलाउनुहोस्। भन– हुन्छ, हामीले बोलाउन सक्छौं किनभने उनीहरू जान्न चाहन्छन् भारतको प्राचीन राजयोग के थियो? जसले भारत स्वर्ग बन्यो, त्यसलाई कसैले सम्झाउनु पर्छ। तर संन्यासीहरूले के सम्झाउन सक्छन्? आध्यात्मिक ज्ञान केवल गीतामा छ। त्यसैले उनीहरूले गएर गीता नै सुनाउँछन्। गीता कति पढ्छन्, कण्ठ गर्छन्! के यो आध्यात्मिक ज्ञान हो र? यो त बनाइएको छ मनुष्यको नाममा। आध्यात्मिक ज्ञान त मनुष्यले दिन सक्दैन। तिमीले अब अन्तर बुझेका छौ– त्यस गीतामा र जुन बाबाले सुनाउनु हुन्छ त्यसमा रात-दिनको फरक छ। दिनु भयो पिताले, तर नाम राखिदिए कृष्णको। सत्ययुगमा कृष्णलाई यो ज्ञान हुँदैन। ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ नै फादर। कति नमिल्ने कुरा छन्। कृष्णको आत्मा जब सत्ययुगमा थियो त्यतिबेला ज्ञान हुँदैन। कति अलमल छ। यी सबैले गएर बेलायतमा नाम प्रसिद्ध गर्न सक्छन्। भाषण गर्न सक्छन्। भन– विश्वको इतिहास-भूगोलको ज्ञान हामीले तपाईंलाई दिन सक्छौं। ईश्वरले स्वर्गको स्थापना कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो स्वर्गबाट फेरि नर्क कसरी बन्छ? यो हामीले तपाईंलाई सम्झाउँछौं। बसेर यो कुरा लेख र फेरि हेर कुनै प्वाइन्ट छुटेको त छैन? फेरि याद गरेर लेख। यसरी प्राक्टिस गर्यौ भने धेरै राम्रो लेख्छौ, धेरै राम्रोसँग सम्झायौ भने नाम प्रख्यात हुन्छ। यहाँबाट पनि बाबाले कसैलाई बाहिर पठाउन सक्नुहुन्छ। उनले गएर सम्झाएमा धेरै राम्रो। ७ दिनमा पनि धेरै होसियार हुन सक्छन्। बुद्धिमा धारण गर्नु छ, बीज र वृक्षको बारेमा विस्तारमा सम्झाउनु छ। चित्रहरूमा धेरै राम्रो सम्झाउन सक्छौ। सेवाको सोख हुनुपर्छ। धेरै उच्च पद मिल्छ। ज्ञान धेरै सहज छ। यो हो पुरानो फोहोरी दुनियाँ। स्वर्गको अगाडि यो पुरानो दुनियाँ मानौ गोबर जस्तै छ, यसबाट गन्ध आउँछ। त्यो हो सुनको दुनियाँ, यो हो गोबरको दुनियाँ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– अहिले हामी यो शरीर छोडेर गएर राजकुमार राजकुमारी बन्छौं। यस्तो स्कुलमा पढ्न जान्छौं। त्यहाँ यस्ता विमान हुन्छन्, फुलप्रुफ हुन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई भित्र यो खुशी रह्यो भने कहिल्यै पनि कुनै कुरामा रूँदैनौ। तिमीले बुझेका छौ नि– हामी प्रिन्स-प्रिन्सेज बन्छौं। तिमीलाई भित्र खुशी किन हुँदैन! भविष्यमा यस्तो विद्यालयमा जान्छौं, यो-यो गर्छौं। थाहा छैन बच्चाहरूले किन भुल्छन्। धेरै नशा चढ्नुपर्छ। अच्छा!
१) यस पुरानो फोहोरी गोबर जस्तो दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा बिर्सिनु छ। सत्ययुगी दुनियाँलाई याद गरेर अपार खुशी वा नशामा रहनु छ। कहिल्यै रुनु छैन।
२) बाबाले जुन गहन रमणिक कुरा सुनाउनु हुन्छ, त्यसलाई धारण गरेर सबैलाई सम्झाउनु छ। स्प्रिचुअल लीडरको टाइटल लिनु छ।
कर्म गर्दा पनि कर्मको बन्धनबाट मुक्त रहने सहजयोगी स्वत: योगी भव
जो बच्चा महावीर छ, उसलाई साकारी दुनियाँको कुनै पनि आकर्षणले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। उसले स्वयंलाई एक सेकेन्डमा न्यारा र बाबाको प्यारा बनाउन सक्छ। निर्देशन मिल्नासाथ शरीरबाट अलग अशरीरी, आत्म-अभिमानी, बन्धन-मुक्त, योगयुक्त स्थितिको अनुभव गर्नेवाला नै सहजयोगी, स्वत: योगी, सदा योगी, कर्मयोगी र श्रेष्ठ योगी हो। उसले जब चाह्यो, जति समय चाह्यो आफ्नो संकल्प, श्वाँसलाई एक प्राणेश्वर बाबाको यादमा स्थित गर्न सक्छ।
एकरस स्थितिको श्रेष्ठ आसनमा विराजमान रहनु– यही तपस्वी आत्माको निशानी हो।